Ny iPhone 8 dia afaka mampiasa rafitra fampidirana induction avy amin'ny Apple | Vaovao IPhone
Ny iPhone 8 dia afaka mampiasa rafitra fampidirana induction avy any Apple fa tsy Energous
Ny iray amin'ireo zava-baovao atolotry ny tsaho fa hahatratra ny maodely iPhone manaraka, izay fantatra ankehitriny iPhone 8, iPhone an'ny 2017 na iPhone amin'ny tsingerintaona fahafolo, dia azo iampangana azy tsy misy tariby, izany hoe avy lavitra na ety ivelany na fitaovana mamokatra angovo. Tamin'ny voalohany dia nino fa hampiasa teknolojia Energous i Apple, saingy ny fampahalalana vaovao dia mahatonga antsika hieritreritra fa tsy hanao izany.
Efa ela ny CEO CEO Energous Steve Rizzone dia nilaza fa nifanaraka tamin'ny "iray amin'ireo orinasa elektronika mpanjifa lehibe indrindra eran-tany" ny orinasany, izay, rehefa heverina fa mampiasa ny haitao misy azy i Samsung, dia nitarika olona maro hieritreritra fa io orinasa io no iray tarihin'i Tim Cook, izany hoe, Apple. Fa naoty ho an'ny mpampiasa vola Copperfield Research manazava maninona ireo avy any Cupertino tsy hampiasa ny vahaolana famahanana tsy misy tariby Fanaraha-maso matetika ny radio matetika WattUp.
1 Ny tsaho vaovao dia manome antoka fa ny iPhone 8 dia hampiditra amin'ny induction
2 Famandrihana tsy misy tariby charging Fampandrenesana induction
Ny tsaho vaovao dia manome antoka fa ny iPhone 8 dia hampiditra amin'ny induction
Copperfield Research dia nanadihady patanty Apple maromaro momba ny fampidirana induction izay nanomboka natomboka tamin'ny 2013. Amin'izao fotoana izao, ny isan'ny patanty amin'ity teknolojia ity dia mihoatra ny ampolony, izay toa famantarana fa mikasa ny hampiasa ny rafi-pandefasana induction ho an'ny tetikasan'izy ireo ho avy ny vahoaka Cupertino.
Patanty tsy mazava izay kasain'ny Apple hampiharina, fa ao amin'ny iray amin'izy ireo dia hitantsika ny fomba nilazan'i Tim Cook sy ny orinasa fa "tsy mahomby", "tsy mahomby" ary mampidi-doza ny teknolojia:
Na izany na tsy izany, ity karazana fandefasana onjam-peo ity dia tena tsy mahomby satria ny ampahany kely amin'ny angovo omena na taratra fotsiny, hoy, ny ampahany amin'ny làlan'ny, ary ny mifanindry aminy dia angonina ny mpandray. Ny ankamaroan'ny angovo dia miparitaka amin'ny lafiny rehetra ary very an-kalalahana. Ny famindrana angovo tsy mahomby toy izany dia mety ekena amin'ny fampitana data, saingy tsy azo ampiharina amin'ny famindrana angovo herinaratra ilaina mba hahavitana ny asa, toy ny famoahana fitaovana elektrika. […]
Ho fanampin'izany, ny tetika toy izany dia mety hiteraka loza amin'ireo zavatra na olona miampita ilay hazo rehefa alefa ny angovo avo na maotina.
Etsy ankilany, Copperfield Research koa dia nilaza izany Apple dia niara-niasa tamin'ny Lite-On Semiconductor hampiasa ny mpanitsy tetezana, izay ampiasaina hanovana ny arus mifandimby (AC) ho amin'izao fotoana izao (DC), singa ilaina amin'ny famandrihana fampidirana ary inona no tsy ilaina raha nanapa-kevitra i Cupertino fa hiantehitra amina modely iray manontolo toy izany an'ny Energous.
Ny iray amin'ireo tsaho momba ny iPhone 8 dia milaza fa hampiasa a i Apple casing vera ho an'ny finday avo lenta manaraka, izay mahatonga antsika hieritreritra ihany koa fa ny terminal dia ho voampanga amin'ny induction: ny casing vera dia tsy ilaina amin'ny famandrihana tsy misy tariby, fa ilaina amin'ny famoahana induction.
Fiampangana tsy misy tariby ≠ Famandrihana induction
Miresaka momba ny maro amin'ireo patantin'i Apple momba ny fametrahana induction fanatsarana nataon'ireo tao Cupertino amin'ity faritra ity ary omeo anay ny famantarana momba ny fomba fiasa izay novolavolain'ny orinasa izay soloin'i Tim Cook. Raha ny filazan'ireo patanty ireo dia mety hitaky fitaovana hafa ny charger na ny famahana ny habaka, toy ny latabatra misy coil fampidirana, birao famandrihana birao na solosaina birao na solosaina finday aza azo ampiasaina hanomezana herinaratra amin'ny iPhone na iPad. Ho fanampin'izay, ny fitaovana dia afaka mizara herinaratra eo anelanelan'izy ireo, izay midika fa afaka iPad ny iPhone na ny mifamadika amin'izany.
Ny olana amin'izany rehetra izany sy izay eritreretin'ny maro aminareo dia ny Ny fampidirana induction dia tsy mitovy amin'ny famahana finday izay tsaho maro no efa nilaza. Ny famandrihana induction dia manery antsika hanana fitaovana mijoro eo amboniny, raha ny famahanana tsy misy tariby kosa dia ahafahantsika mameno fitaovana iray mandritra ny elanelana azo antoka amin'ny mpampita herinaratra. Noho io antony io dia tsy te hino aho fa ny zavatra atombok'i Apple miaraka amin'ny iPhone 8 dia rafitra fiampangana fampidirana 2.0. Nandritra ny taona maro dia nisy fitaovana nampiasa famandrihana fampidirana ary, raha tsy misy ny zavatra ho omen'ny rafitra Cupertino dia ho tara tokoa ny iPhone hampiditra an'io asa io. Na izany na tsy izany, amin'ny volana Janoary isika ary ny iPhone 8, iPhone an'ny 2017 na iPhone amin'ny faha-XNUMX taona dia haseho, raha tsy misy tsy ampoizina, amin'ny volana septambra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Ny iPhone 8 dia afaka mampiasa rafitra fampidirana induction avy any Apple fa tsy Energous